Archive du 20180409
Zanak’i Dada “1er tour” dia vita no tanjona
Nafana ny fihaonan’ny avy amin’ny Antoko Tiako I Madagasikara sy ny ankolafin-kery isan-tsokajiny mpanohana an’i Madagasikara teny amin’ny Kianja Magro Behoririka ny tolakandron’ny sabotsy 7 aprily lasa teo.
Hery Rajaonarimampianina Tsy mahatoky tena intsony
Manatona sy manakaiky ny fifidianana filoham-pirenena. Na dia tsy nilaza tamin`ny fomba ofisialy ny filoha am-perinasa, Hery Rajaonarimampianina, ny filatsahan-kofidiana amin`ny fifidianana izay ho avy dia efa miomana amin`izany ireo eo anivon`ny antoko HVM.
Lanto Rakotomanga Hofohazina ny raharaha 200 tapitrisa ariary ?
Tsy an-kitsitsy intsony ny resaka fifampihantsiana sy ny fifamotehana eo amin’ny mpitondra HVM sy ireo sokajiana ho mpanohitra, indrindra fa taorian’ny raharaha fahalanian’ny lalàm-pifidianana.
Mpamafy lainga, tsy mahatoky valera !
Nihazakazaka ny vahiny nanampy, nitobaka ny vola, nitety vazantany ny filoha tamin’ny fiantsoana ireo mpiara-miombona,…
Fandaminana ny biraom-pifidianana Misy kajy hafahafa
Fenitra napetraka mandritry ny datim-pifidianana ny hoe olona miisa 700 ihany raha be indrindra no tokony handatsa-bato anaty biraom-pifidianana iray.
Fitambaran’ny TIM sy MAPAR Manozongozona ny sezan’ny HVM
Fiovana lehibe teo amin’ny tontolo politika ny fiarahan’ny solombavambahoaka TIM sy MAPAR, fanambarana hery mba hanoherana ny hadalana kasain’ny fitondrana HVM atao eto amin’ny firenena.
Depiote lany henatra amin’ny kolikoly Mihevitra ny vahoaka ho dondrona
Sesilany ny fanadiovan-tenan’ny depioten’ny fitondrana manoloana ny fipariahan’ny horonantsary malaza ho nandritra ny fanaovana kolikoly tamin’ny fampandaniana ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Mpivarotra amin’ny tetezan’Ampasika Avy any amin’ny kaominina namana hafa ny 80 %
Valalanina tanteraka Rakotomandimby Jean, Ben’ny tanànan’i Bemasoandro Itaosy amin’izao manoloana ireo ny hamaroan’ireo mpivarotra etsy amin’ny tetezan’Ampasika.
Toetr’andro eto an-drenivohitra Hidina hatrany amin’ny 15 °C ny maripana amin’ny volana jolay
Hifarana ny 30 aprily ho avy izao raha efa nanomboka ny fiandohan’ny volana novambra lasa teo ny vanim-potoanan’ny fahavaratra eto amintsika.
1/16n-dalan’ny Amboaran’ny CAF Montsan’i Aduana Stars 6 no ho 1 ny Fosa Juniors
Montsan’ny ekipan’ny Aduana Stars Ghaneana 6 no ho 1 omaly alahady 9 aprily 2018 tany Ghana, teo amin’ny 1/16-ndalana bis ny fiadiana ny Amboaran’ny CAF 2018, ny Fosa Juniors Boeny solontena Malagasy miatrika an’ity fifaninanana ity.
Tsipy kanetibe Tompondakan’i Madagasikara Lasan’i Lesa sy Cobra ny dingana fahatelo
Lasan’i Lesa Ratsimbazafy sy Cobra Rahasintsoa avy amin’ny klioban’ny CBP Sabotsy Namehana ny dingana fahatelo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 eo amin’ny taranja tsipy kanetibe sokajy lehilahy.
Fifamoivoizana Anosizato sy Ampasika Miverina indray ny fitohanana lavareny
Misedra olana indray ireo mponina avy any Fenoarivo sy ny manodidina ankehitriny noho ny fiverenan’ny fitohanan’ny fifamoivoizana etsy Anosizato.
Fikaonan-doha ara-toekarena Nanombohana ny fitetezam-paritra ny tao Fianarantsoa
Tohin'ny hetsika izay nataon'ny CREM (Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar) tao amin’ny hotely Carlton ny 26-27 martsa lasa teo,
Kaomandy vaovaon’ny zandarimaria Hitohy ny fanadiovana sy ny ady amin’ny kolikoly
Tontosa tam-pirahalahiana ny sabotsy 7 aprily 2018 teo tamin’ny valo ora maraina ny fifamindran’asa teo amin’ny jeneraly Ramiandrisoa Jean de Dieu Daniel, kaomandin’ny zandarimariam-pirenena teo aloha sy ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, hisolo toerana azy.